Netflix's 'Pane Mumwe Munhu Mukati Meimba Yako' Muurayi Anopfeka Mask Yechiso Chavakatambudzwa - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Netflix's 'Pane Mumwe Munhu Mukati Meimba Yako' Muurayi Anopfeka Mask Yechiso Chavakatambudzwa
Netflix's 'Pane Mumwe Munhu Mukati Meimba Yako' Muurayi Anopfeka Mask Yechiso Chavakatambudzwa
Iwe Uri Wako Wako Wakaipisisa Muvengi ... uye Own Killer Mune Dzimwe Nyaya
by Trey Hilburn III September 13, 2021 3,232 maonero
Kune mamwe mazita akaitirwa kutumira chill yako musana. Iyi, yakafanana neyakawanda yemakumi manomwe nemakumi masere ekushandisa zvinotyisa zvine zvakafanana. Mazita ekuremekedza senge Usapinda Mukamuri Rezasi or Mwari Vakandiudza Kuti vese vane mhete inotyisa kwavari. Zvino, Netflix's Pane Mumwe Mukati Meimba Yenyu inodzokorora njodzi imwecheteyo.
Turera yaPatrick Brice's (Creep) Pane Mumwe Mukati Meimba Yenyu ari pano kuzoshanda nguva yakawandisa pakutitambudza gehena kunze. Iyo inoratidzira mhondi iyo inoda kupfeka chifukidzo chemunhu wavari kuuraya. Taura nezve iyo inotevera nhanho 3D yekudhinda tekinoroji. Hei, kana Kusviba tinogona kuzviita, nesuwo tinogona.
Mutsara we Pane Mumwe Mukati Meimba Yenyu inoenda seizvi:
Makani Young atama kubva kuHawaii achienda kunyarara, guta diki Nebraska kunogara naambuya vake uye kupedzisa chikoro chesekondari, asi sekuverenga kwekutanga kupedza kudzidza, vaanodzidza navo vanoteverwa nemhondi nechinangwa chekuburitsa zvakavanzika zvavo zvakaipisisa kuguta rese, vachityisidzira vanobatwa pavanenge vakapfeka mask-sehupenyu hweuso hwavo. Nenhoroondo isinga nzwisisike yake ega, Makani neshamwari dzake vanofanirwa kuziva kuzivikanwa kwemhondi vasati vazvibatira ivo. PANE MUMWE MUNHU MUNHU WAKO IMBA YAKO yakavakirwa paStephanie Perkins 'New York Times inotengesa inotengesa yezita rimwe chete uye yakanyorerwa screen naHenry Gayden (Shazam!), Yakatungamirwa naPatrick Brice (Creep) uye yakaburitswa naJames Wan's Atomic Monster ( Iyo Inobata) uye Shawn Levy's 21 Mapundu (Stranger Zvinhu).
Patrick Brice ndomumwe wevatungamiriri vandinoda vanoshanda nhasi. Iye mukomana akagwinya pamuviri wake webasa. Mafirimu ake, Creep uye kutevedzana kwayo kwaitonhora kusvika pamwoyo wawo. Asi, basa raBrice rinogara riine iyi chaiyo mhando yekusetsa inomhanya kunyangwe nguva yake inotyisa kwazvo yemufirimu, uye iyi inoita kunge yakazara nayo.
Hatigone kumirira kuti tione iyi uye nerombo rakanaka hatifanirwe kumirira kwenguva refu! Inomhara paNetflix munaGumiguru 6, ingori nguva yekunakidzwa kweHalloween.